लाभांश पारित गर्न हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले बोलायो साधारण सभा, बुकक्लोज कहिले ? - Arthasansar
लाभांश पारित गर्न हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले बोलायो साधारण सभा, बुकक्लोज कहिले ?
मंगलबार, २१ बैशाख २०७८, १० : २९ मा प्रकाशित
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सत्ताइसौं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ ।
कम्पनीको वैशाख १७ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले गरेको निर्णयानुसार उक्त सभा जेठ २८ गते शुक्रबार, कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, थापागाउँ, काठमाडौंमा बिहान ११ बजे भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ ।
सभाले संचालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम नगद लाभांश र बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । संचालक समितिले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई ३.७५ प्रतिशत नगद लाभांश र ३ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि जेठ १३ गतेदेखि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ १२ गतेसम्म नेप्सेमा कायम भई कारोबार गर्ने सेयरधनीहरुले मात्र सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
बीमा शिक्षा : बीमा के हो ? बीमा किन गर्ने ?